ဗိုလ်မှူးစီးပွားရေးညွှန်းကိန်း, Forex Trading ၏အညွှန်းကိန်း
စီးပွားရေးညွှန်းကိန်းတစ်ခုစီးပွားရေးမှာ၏ညှနျကွားပြသသောသော့ကိုစာရင်းဇယားဖြစ်ကြသည်။ အရေးကြီးစီးပွားရေးဖြစ်ရပ်များအတွက် Forex စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုများကိုမောင်း, ထိုကြောင့်ထို famil-iarized အသိပေးကုန်သွယ်ဆုံးဖြတ်ချက်များစေရန် Forex ကုန်သည်များကို enable တံ့သောသင့်လျော်သောအခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးဖြစ်ရပ်များ, ၏ရရန်အရေးကြီးပါသည်။
သူတို့က, စီးပွားရေးခြုံငုံကျန်းမာရေးညွှန်ပြယင်း၏တည်ငြိမ်ရေးကိုမျှော်လင့်ခြင်းနှင့်လည်းစီးပွားရေးလှုပ်ခြင်းအဖြစ်လူသိများရုတ်တရက်သို့မဟုတ်ခန့်မှန်းရခက်ဖြစ်ရပ်များ, ရန်အချိန်အပေါ်တုံ့ပြန်ရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဖွအဖြစ်ညွှန်းကိန်းပြန်ဆိုခြင်းနှင့်ခွဲခြားစိတ်ဖြာအားလုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အရေးကြီးပါသည်။ သူတို့ကစီးပွားရေးမျှော်မှန်းထားသည်စေခြင်းငှါအဘယျသို့နှင့်စျေးကွက်ယူနိုငျသောဦးတည်ချက်, လာမယ့်လာရန်သည်အဘယ်အရာထုတ်ဖေါ်အဖြစ်သူတို့ကလည်းကုန်သည်များက '' လျှို့ဝှက်လက်နက် '' အဖြစ်ရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။
ဒါကြောင့်စီးပွားရေးခြုံငုံပြည်နယ်၏အကြီးမားဆုံးအတိုင်းအတာဖြစ်သကဲ့သို့အဆိုပါဂျီဒီပီအစီရင်ခံစာ, ရှိသမျှစီးပွားရေးညွှန်းကိန်းများအရေးအပါဆုံးတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါဟာတိုင်းတာခံနေရသည့်သုံးလပတ်ကာလအတွင်းတစ်ခုလုံးကိုစီးပွားရေးကိုထုတ်လုပ်ရှိသမျှတို့သည်ကုန်စည်များနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏ငွေကြေးတန်ဖိုးစုစုပေါင်းဖြစ်ပါသည် (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများမပါဝင်ပါ) ၎စီးပွားရေးထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဂျီဒီပီကိုကိုယ်စားပြုသောအရာကို growth-, ထိုအတွင်းနေထိုင်ကြသောလူတိုင်းနီးပါးအပေါ်ကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် စီးပွားရေးမှာ။ စီးပွားရေးကျန်းမာအခါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကြီးထွားလာစီးပွားရေးကိုဖြည့်ဆည်းအားထုတ်တောင်းဆိုအဖြစ်ဥပမာ, အဘယ်အရာကိုကျနော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်မြင်ရပါလိမ့်မည်အနိမ့်အလုပ်လက်မဲ့နှင့်လုပ်အားခတိုးမြှင့်ဖြစ်ပါတယ်။ တက်သို့မဟုတ်ဆင်းဂျီဒီပီအတွက်တစ်ဦးကသိသာထင်ရှားသောပြောင်းလဲမှု, များသောအားဖြင့်ကြောင့်မကောင်းတဲ့စီးပွားရေးကိုများသောအားဖြင့်အနိမ့်ငွေကြေးနှင့်စတော့ရှယ်ယာစျေးနှုန်းများစသည့်ကုမ္ပဏီများ, အဘို့အနိမ့်ဝင်ငွေရရှိမှုကိုဆိုလိုသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရန်, စျေးကွက်အပေါ်သိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကယ့်ကိုစီးပွားရေးပညာရှင်များအနေနဲ့စီးပွားရေးကိုစီးပွားရေးကျဆင်းမှုအတွက်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုအချက်များထဲကတစ်ခုဖြစ်သည့်အနုတ်လက္ခဏာဂျီဒီပီတိုးတက်မှုနှုန်းခန့်စိတ်မပူပါနဲ့။
ဤအစီရင်ခံစာငွေဖောင်းပွမှုအများဆုံးအသုံးများအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလတစ်လကနေလူသုံးကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုတစ်ဦးအစုအဝေး၏ကုန်ကျစရိတ်အတွက်အပြောင်းအလဲတိုင်းတာသည်။ ခြေရင်း - သူ CPI က၏ဖွဲ့စည်းထားသည်တောင်းရှစ်အုပ်စုများသို့ကွဲကွာကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုကျော် 200 အမျိုးအစားပါဝင်ပါသည်အမေရိကန်တစ်လွှားမိသားစုများထောင်ပေါင်းများစွာ၏ထံမှကောက်ယူအသေးစိတ်အသုံးစရိတ်သတင်းအချက်အလက်မှဆင်းသက်လာသော၏တစ်နှစ်ဈေးကွက်ခြင်းတောင်း: အစားအစာနှင့်အဖျော်ယမကာ, အိမ်ယာ , အဝတ်, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှု, အပန်းဖြေ, ပညာရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အခြားကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ။ လူနေမှုကုန်ကျစရိတ်အတွက်အပြောင်းအလဲများတဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရုပ်ပုံရေးဆွဲခေါ်ဆောင်သွားအဆိုပါကျယ်ပြန့်အစီအမံတစ်ခုကိုထိန်းချုပ်မရလျှင်တစ်ခုစီးပွားရေးကိုဖကျြဆီးနိုငျရသောငွေဖောင်းပွမှုတစ်ခုအသိ, အရဘဏ္ဍာရေးကစားသမားကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်။ ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကို၏စျေးနှုန်းများအတွက်လှုပ်ရှားမှုများကိုအများဆုံးတိုက်ရိုက် fixed-ဝင်ငွေအာမခံအကျိုးသက်ရောက်စေ (fixed သည် Periodic ငွေပေးချေမှုနှင့်ရင့်ကျက်အတွက်ကျောင်းအုပ်ကြီး၏နောက်ဆုံးပြန်လာ၏ပုံစံအတွက်ပြန်လည်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု) ။ ကျိုးနွံနှင့်တည်ငြိမ်ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကြီးထွားလာသောစီးပွားရေးတွင်မျှော်လင့်ထားပေမယ့်ကောင်းသောထုတ်လုပ်မှုတွင်အသုံးပြုအရင်းအမြစ်များစျေးနှုန်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုလျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာလျှင်ဖြစ်ပါတယ်, ထုတ်လုပ်သူများအမြတ်ကျဆင်းမှုကိုခံစားရပေမည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငွေကြေးကျုံ့စားသုံးသူဝယ်လိုအားကျဆင်းလာညွှန်ပြနေတဲ့အနုတ်လက္ခဏာနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ CPI ကဖြစ်နိုင်ကျယ်ပြန့်အရေးအပါဆုံးနှင့်စောင့်ကြည့်စီးပွားရေးညွှန်းကိန်းနှင့်လူနေမှုအပြောင်းအလဲများကို၏ကုန်ကျစရိတ်အဆုံးအဖြတ်များအတွက်အကောင်းဆုံးလူသိများအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလုပ်ခ, အငြိမ်းစားအကျိုးခံစားခွင့်, အခွန်ကွင်းခတ်ခြင်းနှင့်အခြားအရေးကြီးသည့်စီးပွားရေးညွှန်းကိန်းများကိုထိန်းညှိဖို့အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာစားသုံးသူစျေးနှုန်းများနှင့်တိုက်ရိုက်နှင့်သွယ်ဝိုက်ဆက်ဆံရေးနှစ်ဦးစလုံးအားမျှဝေပေးသောဘဏ္ဍာရေးစျေးကွက်အတွက်ဖြစ်ပျက်စေခြင်းငှါအဘယျသို့များ၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုပြောပြနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါ CPI ကအတူဤအစီရင်ခံစာငွေကြေးဖောင်းပွမှု၏အရေးအပါဆုံးအတိုင်းအတာတဦးအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ ဒါဟာလက္ကား level မှာကုန်စည်များ၏စျေးနှုန်းကိုတိုင်းတာသည်။ CPI ကကုန်ပစ္စည်းများအတွက်စားသုံးသူများကပေးဆောင်ကုန်ကျစရိတ်ကိုတိုင်းတာစဉ် CPI ကတစ်ဆနျ့ကငျြဘအမျှ PPI အတိုင်းအတာမည်မျှထုတ်လုပ်သူကုန်ပစ္စည်းအဘို့ကိုလက်ခံရရှိထားပါသည်။ အဆိုပါရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏မကျြမှောကျ၌အကြီးမားဆုံး attribute က CPI ကကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ PPI များ၏စွမ်းရည်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ သီအိုရီလက်လီအရောင်းဆိုင်များအားဖြင့်ကြုံတွေ့ကြသည်အများဆုံးကုန်ကျစရိတ်တိုးမြှင့်စားသုံးသူအပေါ်လွန်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ PPI ၏အားသာချက်အချို့မှာနေသောခေါင်းစဉ်:
အနာဂတ် CPI ကအများစုဟာတိကျမှုညွှန်ပြချက်
ဒေတာစီးရီး Long က '' လုပ်ငန်းလည်ပတ်သမိုင်း ''
(MIME, ကုန်စည်အချက်အလက်, အချို့သောန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများတွင်စစ်တမ်းကောက်ယူကုမ္ပဏီများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှကောင်းသောအံဝင်ခွင်ကျ
အဆိုပါ PPI င်း၏ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအမြော်အမြင်အဘို့အထိတွေ့မှုတွေအများကြီးရရှိသွားတဲ့နှင့်သြဇာစျေးကွက်တစ်ပန်းအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအလားအလာအရောင်းနှင့်ဝင်ငွေရရှိမှုခေတ်ရေစီးကြောင်းကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖုံးလွှမ်းလုပ်ငန်းများတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက်အသုံးဝင်သည်။
ဤအစီရင်ခံစာလက်လီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွင်းရောင်းချခဲ့ကုန်ပစ္စည်းများတိုင်းတာကတိုင်းပြည်အနှံ့လက်လီစတိုးဆိုင်များအစုတခုတစ်ခုနမူနာကြာပါသည်။ ဒါဟာယခင်တစ်လကနေဒေတာတွေကိုထင်ဟပ်။ အားလုံးအရွယ်အစား၏ကုမ္ပဏီများ Wal-Mart ကနေလွတ်လပ်သော, အသေးစားမြို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ, စစ်တမ်းများတွင်အသုံးပြုကြသည်။ စစ်တမ်းယခင်တစ်လရဲ့ရောင်းအားကိုဖုံးလွှမ်းလိမ့်မယ်အဖြစ်ကဤအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ပေမယ့်တစ်ဖွဲ့လုံးကဈေးနှုန်းအဆင့်လှုပ်ရှားမှုသာတစ်အချိန်မီညွှန်ပြချက်စေသည်။ ဒါကြောင့်စီးပွားရေးကိုလက်ရှိပြည်နယ်ထင်ဟပ်အဖြစ်လက်လီရောင်းချမှုတစ်တော့သည်ညွှန်ပြချက် (ကအထူးသဖြင့်ဧရိယာအတွင်းကစီးပွားရေးလုပ်ဆောင်မှုများ၏လက်ရှိပြည်နယ်ကိုပြသကြောင်းမက်ထရစ်) စဉ်းစားသည်, ထိုသို့ကိုလည်းထံမှအကြီးမားဆုံးအကျိုးစီးပွားဖန်တီးပေးသောအရေးပါသော Pre-ငွေကြေးဖောင်းပွမှုညွှန်ပြချက်, စဉ်းစားသည် ဗဟိုဘဏ်ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့ဒါရိုက်တာကဒေခြေရာခံကြောင်း Wall Street ကစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ညီလာခံကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့။ အဆိုပါလက်လီအရောင်းအစီရင်ခံစာ၏လွှတ်ပေးရန်ဈေးကွက်ထဲမှာပျှမ်းမျှမတည်ငြိမ်မှုအထက်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ငွေကြေးဖောင်းပွမှုဖိအားတစ်ခုခန့်မှန်းအဖြစ်၎င်း၏ရှင်းလင်းပြတ်သားနောက်ခံလမ်းကြောင်းသစ်၏ညှနျကွားပေါ် မူတည်. ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများဗဟိုဘဏ်နှုန်းကိုလျှော့ချရေးသို့မဟုတ်ဘာ့ဂ်များ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုပြန်လည်စဉ်းစားစေနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, စီးပွားရေးသံသရာ၏အလယ်ထဲမှာလက်လီရောင်းချမှုအတွက်ချွန်ထက်မြင့်တက်တတ်နိုင်သမျှငွေကြေးဖောင်းပွမှုကန့်သတ်များ၏မျှော်လင့်ချက်အတွက်ဗဟိုဘဏ်များကအတိုးနှုန်းအတွက်ရေတိုရေရှည်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်နိုင်ပါသည်။ လက်လီတိုးတက်မှုနှုန်းရပ်တန်သို့မဟုတ်နှေးကွေးလျှင်, ဒီစားသုံးသူယခင်အဆင့်ဆင့်မှာဖြုန်းကြသည်မဟုတ်ခြင်းနှင့်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစားသုံးမှုစီးပွားရေးများ၏ကျန်းမာရေးအတွက်ကစားသည့်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှစီးပွားရေးကျဆင်းမှုအချက်ပြနိုင်ဆိုလိုသည်။
အရေးအပါဆုံးအလုပ်အကိုင်ကြေငြာချက်လစဉ်လတိုင်းပထမဦးဆုံးသောကြာနေ့ကတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာအလုပ်လက်မဲ့နှုန်း (အလုပ်လက်မဲ့သောအလုပ်အင်အားရာခိုင်နှုန်း, created အလုပ်အကိုင်များ၏နံပါတ်, တပတ်နဲ့ပျှမ်းမျှအလုပ်ချိန်နာရီဝင်ငွေရရှိမှုနှုန်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပျမ်းမျှနာရီ) တို့ပါဝင်သည်။ ဤအစီရင်ခံစာများသောအားဖြင့်သိသာထင်ရှားသောစျေးကွက်လှုပ်ရှားမှုအတွက်ရလဒ်များ။ အဆိုပါ NFP (non-လယ်ယာအလုပ်အကိုင်) အစီရင်ခံစာဖြစ်ကောင်းစျေးကွက်ရွှေ့ဖို့အကြီးမားဆုံးပါဝါရှိကြောင်းအစီရင်ခံစာဖြစ်ပါတယ်။ ရလဒ်အဖြစ်အများအပြား analysists, ကုန်သည်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ NFP နံပါတ်နှင့်ကဖြစ်ပေါ်စေမည် directional လှုပ်ရှားမှုတွက်ဆထားကြောင်းသိရသည်။ အရေအတွက်ခန့်မှန်းခြေနှင့်အညီကြွလာသောအခါ၌ပင်ဤမျှလောက်များစွာသောပါတီများဤအစီရင်ခံစာကိုစောင့်ကြည့်ကပြန်ဆိုနှင့်တကွ, ကကြီးမားမှုနှုန်းတျအပွောငျးအလဲဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အခြားအညွှန်းကိန်းနှင့်အတူအမျှအမှန်တကယ် NFP ဒေတာနှင့်မျှော်လင့်ထားသည့်ကိန်းဂဏန်းများအကြားခြားနားချက်စျေးကွက်အတွက်အချက်အလက်များ၏ခြုံငုံအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ non-လယ်ယာလုပ်ခလစာတိုးချဲ့နေသည်အတွက်ကြောင့်စီးပွားရေးကြီးထွားလာခြင်းနှင့်အပြန်အလှန်ကြောင်းကောင်းတစ်ဦးအရိပ်အယောင်ဖြစ်ပါတယ်။ NFP အတွက်တိုးမြှင့်တစ်ဦးအစာရှောင်မှုနှုန်းမှာပေါ်ပေါက်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ဤငွေဖောင်းပွမှုတစ်ခုတိုးဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်။
CONSUMER ယုံကြည်မှု INDEX (CCI)
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. ညွှန်ပြသည့်အတိုင်း, ဒီအညွှန်းကိန်းစားသုံးသူယုံကြည်မှုတိုင်းတာ။ ဒါဟာစားသုံးသူတွေလှုပ်ရှားမှုချွေတာနဲ့ဖြုန်းစားသုံးသူကတဆင့်ဖော်ပြသောစီးပွားရေးပြည်နယ်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ရှိသည်အကောင်းမြင်၏ဒီဂရီအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဒါကစီးပွားရေးညွှန်းကိန်းလနောက်ဆုံးအင်္ဂါနေ့ဖြန့်ချိ, ထိုသို့ယုံကြည်မှုကလူတစ်နည်းမှာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်ပါတယ်ကြောင့်သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေတည်ငြိမ်မှု, သူတို့ရဲ့အသုံးစရိတ်လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုခံစားရပုံကိုတိုင်းတာသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, CCI စီးပွားရေးခြုံငုံပုံသဏ္ဍာန်များအတွက် key ကိုညွှန်ပြချက်အဖြစ်ရှုမြင်သည်။
အဆိုပါတိုင်းတာမှုများအတွက်စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်၏စားသုံးမှုအစိတ်အပိုင်းအဆင့်အနေနဲ့ပြအဖြစ်အသုံးပြုကြသည်နှင့်အတိုးနှုန်းအပြောင်းအလဲများကိုအဆုံးအဖြတ်အခါ Federal Reserve CCI ကြည့်ပါတယ်။
ဤအစီရင်ခံစာလူတွေရေရှည်ဝယ်ယူမှု (3 နှစ်ပေါင်းထက်ပိုပြီးကြာရှည်မည်ဟုမျှော်လင့်နေကြသည်ထုတ်ကုန်) ပေါ်မှာဖြုန်းနေကြတယ်ကြောင့်ကုန်ထုတ်စက်မှုလုပ်ငန်းများအနာဂတ်သို့အချို့သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုပေးစေခြင်းငှါမည်မျှအတိုင်းအတာတစ်ခုပေးသည်။ ဒါဟာမသာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက်အသုံးဝင်နိုင်ရန်အဆင့်ဆင့်၏အမည်ခံစည်းကမ်းချက်များ၌, ဒါပေမယ့်တစ်ဖွဲ့လုံးကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းဝယ်လိုအား၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုကဲ့သို့ဖြစ်၏။ မြို့တော်ကုန်ပစ္စည်းများမြင့်ကိုယ်စားပြု - ကုန်ကျစရိတ်မြို့တော်ကုမ္ပဏီနာရီအလုပ်လုပ်ခဲ့နှင့် Non-လယ်ယာလုပ်ခလစာအတွက်နောက်ထပ်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်များနှင့်အကျိုးအမြတ်ကိုတက်တိုးမြှင့်ရောင်းအားဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအခြေအနေများ, ယုံကြည်စိတ်ချစေနှင့်အချက်ပြနိုင်ပါတယ်ကိုလည်းအဆင့်မြှင့်တင်။ အဆိုပါအကြမ်းခံကုန်စည်အမိန့်၏အားသာချက်အချို့မှာနေသောခေါင်းစဉ်:
မြင့်မားမတည်ငြိမ်သော; သက်တမ်းခေတ်ရေစီးကြောင်း - ရွေ့လျားပျမ်းမျှရှည်လျားခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့အသုံးပြုရပါမည်
ဒီအညွှန်းကိန်းများလွှတ်ပေးရေးရက်စွဲနှစ်ခုဗုဒ္ဓဟူးနေ့တစ်နှစ်လျှင်အတိုးနှုန်းရှစ် (8) ကြိမ်ပေါ်တိုင်းဖက်ဒရယ်ပွင့်လင်းစျေးကွက်ကော်မတီ (FOMC) အစည်းအဝေးမတိုင်မီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါဝေါဟာရကို '' Beige သစာအုပ်က 'လို့ခေါ်တဲ့ဗဟိုဘဏ်အစီရင်ခံစာအတွက်အသုံးပြုသည် Federal Reserve ခရိုင်အားဖြင့်လက်ရှိစီးပွားရေးအခြေအနေများအပေါ် Commentary ၏အကျဉ်းချုပ်.
ယေဘုယျအားဖြင့်အဆိုပါ Beige သစာအုပ်စသည်တို့ကိုစီးပွားရေးပညာရှင်များ, စျေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူများကအတူဘဏ်များနှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းရာမှအစီရင်ခံစာများထားရှိရေးနှင့်နောက်ဆုံးအစည်းအဝေးကတည်းကဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြစေခြင်းငှါစီးပွားရေးအပြောင်းအလဲများအပေါ်အဖွဲ့ဝင်များကအကြောင်းကြားရန်အသုံးပြုသည်။ များသောအားဖြင့်ကျင်းပသည့်အဆိုပါဆွေးနွေးမှုများအလုပ်သမားစျေးကွက်, လုပ်အားခနှင့်စျေးနှုန်းဖိအား, လက်လီနှင့်အီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှု output ကိုလှည့်ပတ်နေကြသည်။ အဆိုပါအဝါနုရောင်ရှိသောစာအုပ်များအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှဆောင်တတ်၏အရေးပါမှုကိုသူတို့ရှေ့ဆက်-ရှာဖွေနေသည့်မှတ်ချက်များကိုတွေ့နိုင်ပါသည်နှင့်ခေတ်ရေစီးကြောင်းခန့်မှန်းအတွက်ကူညီရန်နှင့်လာမည့်လအနည်းငယ်ကျော်အပြောင်းအလဲများကိုမျှော်လင့်ခြင်းအလိုငှါဖြစ်၏။
အတိုးနှုန်းဟာ Forex စျေးကွက်၏အဓိက drivers တွေကိုဖြစ်ကြပြီးလူအပေါင်းတို့သည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်စီးပွားရေးညွှန်းကိန်းများနီးကပ်စွာစီးပွားရေးခြုံငုံကျန်းမာရေးဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ရန်အတွက်ဖက်ဒရယ်ပွင့်လင်းစျေးကွက်ကော်မတီတို့ကစောင့်ကြည့်နေကြပါတယ်။ အဆိုပါဗဟိုဘဏ်သူတို့ကိုလျှော့ချပေးမည်ဆိုပါက, အညီဆုံးဖြတ်မပြောင်းလဲအတိုးနှုန်းမြင့်တက်သို့မဟုတ်စွန့်ခွာ, ရှိသမျှစီးပွားရေးရဲ့ကျန်းမာရေးအပေါ်ကိုစုဝေးစေအထောက်အထားပေါ်မူတည်ပြီးနိုင်ပါတယ်။ အတိုးနှုန်း၏တည်ရှိမှုငွေချေးမယ့်အစားတစ်ဦးဝယ်ယူအောင်ငွေကိုကယ်ဖို့စောင့်ဆိုင်း၏ချက်ချင်းပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အတိုးနှုန်းအောက်ပိုင်း, ပိုမိုဆန္ဒရှိလူတွေထိုကဲ့သို့သောအိမ်များသို့မဟုတ်မော်တော်ကားအဖြစ်ကြီးမားသောဝယ်ယူမှု, အောင်ပိုက်ဆံချေးဖို့ရှိပါတယ်။ စားသုံးသူအကျိုးစီးပွားအတွက်လျော့နည်းပေးဆောင်သည့်အခါ, ဒီကသူတို့ကိုစီးပွားရေးလျှောက်လုံးတိုးမြှင့အသုံးစရိတ်၏ဂယက်ထဖန်တီးနိုင်သည့်ဖြုန်းဖို့ပိုပြီးပိုက်ဆံပေးသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်အဆင့်မြင့်အတိုးနှုန်းစားသုံးသူသလောက်တစ်ခါသုံးဝင်ငွေရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးနဲ့အသုံးစရိတ်အပေါ်ပြန်ဖြတ်ရမည်ဟုဆိုလို။ ပိုမိုမြင့်မားသောအတိုးနှုန်းတိုးချဲ့ငွေချေးစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူပေါင်းစပ်သောအခါ, ဘဏ်များနည်းပါးလာချေးငွေများပါစေ။ ဤအကုန်ထုတ်စွမ်းအားနှေးကွေးသို့မဟုတ်န်ထမ်းများ၏အရေအတွက်ကိုလျှော့ချ, အရှင်အသစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအဘို့အဖြုန်းအပေါ်ကိုပြန်ဖြတ်မည်သူစားသုံးသူများ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်လယ်သမားသက်ရောက်သည်။ အတိုးနှုန်းမြင့်တက်သို့မဟုတ်ကျသွားကြသည်အခါတိုင်းကျနော်တို့ဖက်ဒရယ်ရန်ပုံငွေနှုန်း (ဘဏ်များအချင်းချင်းပိုက်ဆံချေးဖို့အသုံးပြုတဲ့နှုန်းက) အကြောင်းနားထောင်လော့။ အတိုးနှုန်းအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့်စီးပွားရေးကျဆင်းမှုနှစ်မျိုးစလုံးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်းသည်ခိုင်ခံ့ကျန်းမာစီးပွားရေးမှာ၏ရလဒ်အဖြစ်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှကုန်ပစ္စည်းများနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏စျေးနှုန်းမြင့်တက်ဖို့ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအမှတ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပါ left လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, က purchasing power တစ်ခုသိသိသာသာဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ မြင်နိုင်ပါသည်အဖြစ်, အတိုးနှုန်းစားသုံးသူနှင့်စီးပွားရေးအသုံးစရိတ်, ငွေကြေးဖောင်းပွခြင်းနှင့်ကျဆင်းမှုလွှမ်းမိုးခြင်းအားဖြင့်စီးပွားရေးကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ဖက်ဒရယ်ရန်ပုံငွေမှုနှုန်းချိန်ညှိခြင်းအားဖြင့်, ဗဟိုဘဏ်ရေရှည်ကျော်ချိန်ခွင်လျှာအတွက်စီးပွားရေးကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်။
အဆိုပါအစီရင်ခံစာအဖြစ်တစ်လအတွင်းရှိပြီးသားနေအိမ်အရောင်းတည်ဆောက်ခြင်းစတင်ကြပြီအသစ်ကနေအိမ်များ၏နံပါတ်ပါဝင်သည်။ လူနေအိမ်လှုပ်ရှားမှုတစ်တိုင်းပြည်အတွက်စီးပွားရေးနှိုးဆွ၏အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်နှင့်စီးပွားရေးခွန်အားကောင်းတစ်ဦးအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ အနိမ့်အတှဲအိမ်မှာအရောင်းနှင့်အနိမ့်သစ်ကိုအိမ်မှာစတင်အားနည်းစီးပွားရေး၏နိမိတ်လက္ခဏာကိုအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။ အဆောက်အဦခွင့်ပါမစ်နှင့်အိုးအိမ် stats နှစ်ဦးစလုံးတစ်ဦးကြိုတင်တစ်လကနေရာခိုင်နှုန်းပြောင်းလဲမှုနှင့်တစ်နှစ်-over-တစ်နှစ်ကာလအဖြစ်ပြသပါလိမ့်မည်။ အဆိုပါအိမ်ရာစတင်များနှင့်အဆောက်အဦး stats နှစ်ဦးစလုံးဦးဆောင်ညွှန်ကိန်းအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားကြသဖြင့်, အဆောက်အဦမစ်ကိန်းဂဏန်းများအဆိုပါညီလာခံဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အမေရိကန်ဦးဆောင်ညွှန်းကိန်း (လာလအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးလှုပ်ရှားမှုများ၏ညှနျကွားကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့လစဉ်အသုံးပြုခဲ့ကာအညွှန်းကိန်း) တွက်ချက်ရန်အသုံးပြုကြသည်။ ဤသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စျေးကွက် shocks တဲ့အစီရင်ခံစာမဟုတ်ပါ, သို့သော်အချို့သောလေ့လာသုံးသပ်သူများအိမ်ရာစတင်ကအခြားစားသုံးသူ-based ညွှန်းကိန်းအဘို့ခန့်မှန်းခြေဖန်တီးကူညီပေးဖို့သတင်းပို့ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်။
ကော်ပိုရိတ် Profits တွေ
ဤသည်စာရင်းဇယားအစီရင်ခံစာသုံးလပတ်အခြေခံပေါ်မှာစီးပွားရေးဇုန်အားသုံးသပ်ခြင်း (BEA) ၏ဗျူရိုအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးနှင့်အမျိုးသားဝင်ငွေခွန်နှင့်ကုန်ပစ္စည်း Accounts ကို (NIPA) တွင်ကော်ပိုရေးရှင်း၏အသားတင်ဝင်ငွေအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ခိုင်မာတဲ့ကော်ပိုရိတ်အမြတ်အစွန်းရောင်းအားမြင့်တက်ရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းနှင့်အလုပ်အကိုင်အတိုးတက်မှုနှုန်းအားပေးအဖြစ်သူတို့ရဲ့အရေးပါမှုသည်ဂျီဒီပီနှင့်အတူဆက်စပ်တည်ရှိသည်။ ကော်ပိုရေးရှင်း, ငွေကြေးမြှင့်သည့်ရှယ်ယာရှင်များမှခွဲဝေပေးဆောင်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက် re-ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဖို့သူတို့ရဲ့အကျိုးအမြတ်အတွက်အသုံးပြုပါ။ ထို့အပြင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထိုကြောင့်သူတို့သည်စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်, ကောင်းမွန်သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေပါ။
အဆိုပါကုန်သွယ်ရေး Balance ပေးထားသောအချိန်ကာလအတွက်ပေးထားသောနိုင်ငံသွင်းကုန်များနှင့်ပို့ကုန်အကြားကွာခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အခြားနိုင်ငံများမှ '' စီးပွားရေးနှင့်လူအမျိုးမျိုးတို့အကြားကုန်သွယ်မှု၏စီးဆင်းမှုကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေး၏ဆွေမျိုးအစှမျးသတ်တိကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်သူတို့ကိုဖွအဖြစ်ကတစ်ဦးစာရင်းအင်း tool အဖြစ်စီးပွားရေးပညာရှင်များကအသုံးပြုသည်။
ကုန်သွယ်ရေးပိုလျှံနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ကြောင်း, တစ်ဦးအပြုသဘောတန်ဖိုးပို့ကုန်တင်သွင်းမှုကြောင့် သာ. ကြီးမြတ်ဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုတယ်ဘယ်မှာ; အခြားတစ်ဖက်တွင်နေစဉ်, ကုန်သွယ်ရေးလိုငွေပြမှုသိသိသာသာပြည်တွင်းကြွေးမြီဆီသို့ဦးတည်သွားစေနိုင်ပါတယ်။
ဤသည်စာရင်းအင်းတိုင်းတာခြင်းစားသုံးသူအမြင်ကဆုံးဖြတ်စီးပွားရေးခြုံငုံကျန်းမာရေးစီးပွားရေးညွှန်းကိန်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်း၏လက်ရှိဘဏ္ဍာရေးကျန်းမာရေးခံစားခကျြ, ရေတိုသက်တမ်းအတွက်ခရိုင်ရဲ့စီးပွားရေးများ၏ကျန်းမာရေးနှင့်ရေရှည်စီးပွားရေးတိုးတက်မှု၏ခန့်မှန်းချက်များပါဝင်သည်။
အဆိုပါကုန်ထုတ်လုပ်မှု PMI ပေးထားသောနိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ၏စီးပွားရေးကျန်းမာရေးတစ်ခုညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအညွှန်းကိန်းဟာလက်ရှိစီးပွားရေးပြည်နယ်နှင့်အနာဂတ်အတွက်အလားအလာသူတို့ရဲ့အမြင်တိုင်းတာခြင်း, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍကိုဖြတ်ပြီးဦးဆောင်နေသည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်အရောင်းမန်နေဂျာ၏စစ်တမ်းများအပေါ်အခြေခံသည်။
အဆိုပါအညွှန်းကိန်းသဘေ်ာစစ်တမ်းကပိုအရေးကြီးပုံ၏ဖြစ်ဖို့စဉ်းစားသည်အဘယ်မှာရှိ Markit နှင့်သဘေ်ာကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားပါသည်။
တစ်ခုကအညွှန်းကိန်းတိုးငွေကြေးအားကောင်းစေပါတယ်နှင့် 50 အမှတ်အမှတ်အသားကုန်ထုတ်လုပ်မှုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုမြင့်တက်ခြင်းနှင့်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောကျဆင်းနေခြင်းဖြစ်သည်အပေါ်ဖြစ်သောအထက်, သော့ကိုအဆင့်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေသည်။
အဆိုပါကုန်ထုတ်လုပ်မှု PMI အညွှန်းကိန်းကိုလစဉ်ထုတ်ဝေနေသည်။